गुगल फाेटाेज प्रयाेग गर्नुहुन्छ ? गुगलले दियाे अकाउन्ट हट्न सक्ने चेतावनी! - DURBAR TIMES
HomeScience & Technologyगुगल फाेटाेज प्रयाेग गर्नुहुन्छ ? गुगलले दियाे अकाउन्ट हट्न सक्ने चेतावनी!
यदि तपाइँ जिमेल , गुगल फाेटाेज र गुगल ड्राइभ प्रयाेग गर्नुहुन्छ भने तपाइकाे लागि खास खबर बाहिर आएकाे छ । गुगलले आफ्ना प्रयाेगकर्ताहरूलाइ कम्पनीकाे नयाँ नियम पालना नगरेकाे खण्डमा उनीहरूकाे अकाउन्ट हट्न सक्ने चेतावनी दिन थालेकाे छ । गुगलले याे कुरा एक इमेलमार्फत जानकारी गराएकाे हाे । जहाँ गुगलकाे नयाँ पाेलिसी अर्काे सालबाट लागु हुने कुरा उल्लेख गरिएकाे छ।
यस्ता अकाउन्ट हुन सक्छन् डिलेट
Express.co.uk काे एक रिपाेर्ट अनुसार जुन अकाउन्टहरू गुगलकाे नयाँ पाेलिसीलाइ पालना गर्दैनन् उनीहरूकाे निजी कन्टेन्टहरू गुगलकाे सर्भरबाट हट्न सक्छन् । तर , गुगलले प्रष्ट पारिसकेकाे छ कि कुनैपनि कन्टेन्टहरू हटाउनुअघि प्रयाेगकर्ताहरूलाइ बारम्बार सूचना प्रदान गरिनेछ , ता कि प्रयाेगकर्ताहरूलाइ नयाँ पाेलिसीकाे बारेमा जानकारी हासिल गर्न पर्याप्त समय प्राप्त हाेस् ।
गुगलले याे पनि बताएकाे छ कि कुनैपनि अकाउन्ट २ वर्षदेखि प्रयाेग गरिएकाे छैन अथवा कुनै अकाउन्टले स्टाेरेज लिमिट पार गरेकाे २ वर्ष भन्दा बढी भैसकेकाे छ भने त्यस्ता अकाउन्टहरू गुगलकाे निशानामा पर्न सक्छन् ।
नयाँ नियमकाे घाेषणा गर्ने क्रममा गुगलले “यदि तपाँइँ जिमेल , ड्राइभ या फाेटाेजमा २४ महिनाभन्दा बढी समयदेखि एक्टिभ हुनुहुन्न भने हामी एक्टिभ नभएका अकाउन्टकाे सेवा बन्द गर्न सक्नेछाैँ ।” याे नियम २०२१ काे जुन २१ देखि लागु हुने कुरा गुगलले प्रष्ट पारेकाे छ ।
स्टाेरेज क्षमताभन्दा कम प्रयाेग भएका Google One प्रयाेगकर्ताहरूलाइ याे नयाँ पाेलिसीले प्रभावित नगर्ने पनि गुगलले जानकारी दिएकाे छ । गुगलले पछिल्लाे समयमा प्रयाेगकर्ताहरूलाइ अनलिमिटेड हाइ क्वालिटी डाटा ब्याक अप सुविधा प्रदान गर्दै आएकाेमा अब जुन २१, २०२१ देखि प्रिमियम भर्सनमा जान लागेकाे हाे । याे चार्ज १५ जिबी स्टाेरेज प्रयाेग गरिसकेपछि लिन सकिन्छ ।
Previous articleप्रदुषणका कारण फोक्सोमा समस्या देखापर्ने गर्छन, सफा गर्ने ८ उपाय
Next articleविवाह बन्धनमा बाधिँइन् अभिनेत्री श्वेता खड्का(तस्बिरसहित)